Dowlada Britain oo bilaawday inay ka qeyb qaadato soo celinta bilicdii Muqisho |
Dowlada Britain oo bilaawday inay ka qeyb qaadato soo celinta bilicdii Muqisho
Iyada oo la’ogyahay in dowlada Norwey ay qeyb weyn ka qaadatay dib u soo laabashada bilicda magaalada Muqdisho oo markii ugu horeysay ay kahir gelisay gobalka Banaadir leyrar Cadceed ku shaqeynaya ayaa dowlada Britain waxa ay iyana markeeda maamulka gobalka Banaadir ugu deeqday leyrar nuucaas oo kale ah.
Gudoomiyaha gobalka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Maxamuud Axmed Nuur (Tarzen) ayaa waxa uu xaqiijiyay in dowlada Britan ay 100 baalle iyo qalabkooda oo dhamees tiran oo iyana ahaan doona sida kuwa Norwey gobalka ugu deeqday cadcedana ku shaqeyn doona ay dhawaan soo gaarayaan Muqdisho.
Waxa uu sheegay tarzan in ay nalalkaasi cadceedda ku shaqeynaya ay uga faa’iideyn doonaan Shacabka iyaga oo gelin doona wada kasta oo magaalada Muqdisho marta.
Nalalka cadceedda ku shaqeynaya ayaa hada waxaa laga suray labada wado ee Muqdisho ugu muhiimsan ee Maka Al-mukarama iyo Wadnaha iyada oo dhawaan lagu bilaabi doono wadada Sodonka sida uu xqiijiyay Afhayeenka gobalka Banaadir, Maxamed Yuusuf.
Nalalka cadceedda ku shaqeeya ayaa waxa ay magaalada Muqdisho ku soo celiyeen horukac dhal waliba ah iyada oo goobaha laga hirgeliyay ganacsiga habeenkii uu kusoo batay sidoo kalana amaanku uu si aad ah u soo hagaagayo maadaama mugdigii leesugu soo gaba jiray uu meesha ka baxay.